President’s Office Director Hmuu Zaw “သတင်းဇစ်မြစ်နှင့် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “ကြိုတင်ကြံစည် မွတ်စလင်မျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုကြီး” ဆိုတာ မဖုံးကွယ်နိုင်အောင် တလောကလုံး သိသွားကြပြီ
Myanmar snubbed ASEAN because Myanmar knows ASEAN needs them to exploit but they don’t need ASEAN any more »
အဆိုပါသတင်းတွင်” နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အတည်ပြု ပြောကြားသည်၊” ” နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ သိရှိရသည်” စသည့် စကားရပ်များ ဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါသည်။ သတင်း မီဒီယာများနှင့် အဓိက ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှု ပြုနေရသူ တစ်ဦးအနေဖြင့် အဆိုပါ ဖော်ပြချက်နှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်နေပါသည်။ ယင်းဂျာနယ်သို့လည်း မိမိအနေဖြင့် အဆိုပါ သတင်းဖော်ပြချက်အတိုင်း ပြောကြားခဲ့ဘူးခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
သို့သော် မိမိကိုယ်တိုင် လတ်တလော ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်မျိုးတွင်တော့ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်ဆိုသည်မှာ – – – – – -။
Tags: Asia, Chief executive officer, Multimedia, President, United States, Yangon
This entry was posted on October 31, 2012 at 6:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.